के अनलाइन सफ्टवेयर निर्देशिका प्लेटफर्मको साथी वा प्रतिस्पर्धी हो? | Martech Zone
बिहीबार, अक्टुबर 26, 2017 बिहीबार, अक्टुबर 26, 2017 Douglas Karr
मेरो एक मित्रले मलाई यो हप्ता तेस्रो-पार्टी डाइरेक्टरी साइटमा उनीहरूको प्लेटफर्म समीक्षा गर्न भन्यो, साइटले उद्योगमा अन्य विक्रेताहरूलाई धेरै यातायात चलाउँदछ भनेर बताउँदै। मैले डाइरेक्टरी साइटको द्रुत विश्लेषण गरे र यो सत्य हो, तिनीहरूले मेरो साथीको ईन्डस्ट्रीमा केही ठोस रैंकिंगहरू प्राप्त गरेका छन्। यो केवल तार्किक देखिन्छ कि तिनीहरूले निर्देशिका मा राम्रो दृश्यता प्राप्त गर्न समीक्षा माग्नु पर्छ।
डाइरेक्टरी सानो साइट होइन, यो ठूलो छ। योसँग राम्रो खोज इञ्जिन श्रेणीकरण, एक विकास कर्मचारी, सामाजिक मिडिया मार्केटिंग सment्लग्नता, र सशुल्क विज्ञापन बजेट पनि छ। किनकि यसको ट्राफिक यति भारी छ र यसले यति धेरै प्रासंगिक दर्शकहरूलाई प्लेटफर्महरूमा ड्राइभ गर्न सक्दछ, यसमा आन्तरिक सशुल्क विज्ञापन प्रणाली पनि छ जहाँ मेरो मित्रले अधिक प्रख्यात प्रोफाइल खरीद गर्न सक्दछ वा सान्दर्भिक पृष्ठहरूमा विज्ञापन प्रदर्शन गर्दछ।
सम्भावित यात्रा के हो?
निर्देशिका प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित प्रासंगिक कुञ्जी शव्दहरूको लागि खोजी ईन्जिनहरूमा फेला पर्‍यो।
खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताले निर्देशिकामा क्लिक गर्दछ जहाँ उनीहरूले तपाईंको प्लेटफर्म भेट्टाउँछन् तपाईंको सबै प्रतिस्पर्धाको लागि।
केहि खोज इन्जिन प्रयोगकर्ताहरू तपाईंको कम्पनीमा क्लिक-थ्रु। धेरै तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू हराउँछन्, विशेष गरी यदि तिनीहरूसँग डाइरेक्टरीमा ठूलो विज्ञापन बजेट छ।
यहाँ यस यात्राको साथ समस्या छ ... यो प्लेटफर्मको साथी होइन, यो उनीहरूको प्रतिस्पर्धी हो। मञ्चले जानाजानी तपाईंको सम्भावनाहरू रोकिरहेको छ, तिनीहरूलाई उनीहरूको साइटमा मोड्दै, ताकि दर्शकहरूलाई त्यहाँ मुद्रीकृत गरिनेछ। तपाईले डाइरेक्टरीलाई प्रमोशन गर्नुहुन्छ प्रयोगकर्ताहरूमा समीक्षा राख्नका लागि - उनीहरूले के गर्छन् - जसले डाइरेक्टरीको खोजी क्रमलाई सुधार गर्दछ। जुन बिन्दुमा, यो आफैंमा तपाइँ र तपाइँको सम्भाव्यहरूको बीचमा गहिराउँदछ। तपाईं अब निर्देशिका मा निर्भर हुनुहुन्छ तपाईंको व्यवसायलाई फीड गर्न।
विकल्प के हो?
तपाइँ एक बलियो अनलाइन उपस्थिति निर्माण, निर्देशिका भन्दा रैंकिंग।
संभावनाहरूले निर्देशिका बेवास्ता गर्दछ र तपाईंको सामग्रीमा सीधा जान्छ, कहिले प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत गर्नुहुन्न।
तपाईंको सान्दर्भिक, सम्मोहक सामग्रीले आगन्तुकलाई एक ग्राहक बन्न नेतृत्व र नेतृत्वमा प्रलोभनमा पार्दछ।
त्यो निर्देशिकाको खोज ईन्जिन नतिजामा तपाइँलाई पिट्न भन्दा राम्रो मौका छैन, तपाईं तिनीहरूलाई किन मद्दत गर्नुहुन्छ? तपाईं तिनीहरूलाई किन भुक्तानी गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको साइट समर्थन गर्नुहुन्छ, र यस बीचमा उनीहरूले तपाईंको प्रतिस्पर्धीलाई सहयोग गरिरहेका छन्? यो तपाईंको स्टोरको अगाडि कोही उभिरहेको जस्तो छ, तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूलाई ब्लकको वरपरको सम्भावनाको भ्रमण गर्दै, र तपाईंलाई उनीहरूलाई तपाईंको स्टोरमा फिर्ता ल्याउने सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईंलाई भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै। तपाईंले तिनीहरूलाई तपाईंको ढोकाबाट लात माग्नुभयो, हैन?
तपाइँ कुनै पनि जैविक संसाधन दुबै मित्र र प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्नु पर्छ। अवश्य पनि, तिनीहरूसँग तपाईंमा अविश्वसनीय ट्राफिक ड्राइव गर्ने अवसर हुन सक्दछ। तर यो तपाइँको लागत मा छ। तपाईंले निर्धारण गर्नु पर्छ कि पर्दैन तपाईं निर्भरतासँग ठीक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न र पहुँचको लागि भुक्तान जारी राख्न इच्छुक हुनुहुन्छ उनीहरुको दर्शक।
म गर्दिन र मैले मेरो साथीको प्लेटफर्मको लागि समीक्षा लेखिन।
टैग: निर्देशिकाहरूअनलाइन अनुप्रयोग निर्देशिकाहरूअनलाइन सास डाइरेक्टरीप्लेटफर्म निर्देशिकाहरूसफ्टवेयर निर्देशिका